SomaliaReport: Afhayeen ka Horyimid Go’aankii Ra’i
Afhayeenka baarlamanka soomaaliya mudane Shariif Xassan Sheekh ayaa talaadadii socdaal ku tagay magaalada Nairobi si uu uga qayb qaato shirka nabadda ee UN.ta iyada oo ay jirto baaqii ra’iisal wasaaraha ee ahaa in la qaadaco shirkaa. wargayska Somalia Report ayaa ilo-wareedyo ka soo xigtay sidaa. Shariif Xassan Sheekh ayaa sida laga soo xigtay afhayeenkii hore ee baarmalanka, Professor Maxamed Cumar Dalxa, waxaa ku weheliyey socdaalkan xubno ka tirsan baarlamakana oo ay badidoodu yihiin xubnii baarlamanka ku jiray xilligii Ra’iisal wasaarihii hore, mudane C/rashiid Cumar Sharmaarke. Xildhibaano ka tirsan baarlamanka ayaa sheegay inuusan afhayeenku la samayn wax wadatashi ah, waxayna ka qaybgalka shirkan ku tilmaamen mid aan dastuurka waafaqsanayn isla markaana ah wax laga xishoodo.
Xidhiidh khadka taleefanka ah oo lala sameeyey afhayeenka ayaan laga jawaabin balse ilo aad ugu dhaw afhayeenka gana gaabsaday in la sheego arimo amni dartood ayaa xaqiijiyey ka qaybgalkiisa shirkan ee bari.
Maxamed Nadiif C/raxmaan oo ah xildhibaan baarlaman ayaa u sheegay wargayska Somalia Report inuu afhayeenku afduub ku sameeyey sharci-dajiyeyaasha iyo codkoodaba.
Mudane C/raxmaan ayaa yidhi “Waa hawl u taala golaah wasiirada inay ka qayb galaan shirkan iyo in kale, baarlamanku kama qayb qaadan karo shirkan, haddii ay dhacaysana waa inuu baarlamanku wada-tashi ka yeesho arinkaa.”
Professor Dalxa ayaa sheegay in aqlabiyadda aqalka baarlamaanku uu ka soo horjeestay ka qaybgalka shirkan islamarkaana ay taageereen go’aankii golaha wasiirada ee ahaa qaadicidda shirkan. Professorka ayaa ku eedeeyey afhayeenku inuu go’aan kaligii iska gaadhay uusan qiimayn mudnaantii aqlabiyadda.
“Waxay ahayd inuu la kulmo sharci-dajiyeyaasha lana sameeyo wada tashi sidii uu ra’iisal wasaaruhuba yeelay, xaq uma laha inuu kaligii iska go’aansado inuu ka qayb galo shirkan” Professor Dalxa ayaa sidaa ku andacooday.
Ka qaybgalka Shariif Hassan ee shirkan ayaa astaan u ah in khilaafkii bilihii la soo dhaafay u dhexeeyey hoggaanka dawladdu uu cirka isku shareeray.
Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa ka digay in khilaafkan u dhxeeya hoggaanka dawladdu uu saamayn ku yeelan karo hawlagallada Milatari ee ay dawladdu kaga soo horjeeddo malayshiyada Al-Shabaab.
Khilaafka u dhexeeya dawladda ku meel gaadhka ah ayaa ku saabsan oo kaliya muddo kordhinta xilliga ku meel gaadhka ah. Afhayeenku wuxuu ku adkaysanayaa in doorashada madaxweynaha iyo afhayeenkuba ay noqoto bisha July iyo Aug. ra’iisal wasaaruhuna wuxuu diidan yahay muddo kordhinta sadexda sano ah isaga oo qaba in muddo kordhinta hay’adaha dawladdu aysan ka badan hal sano oo kaliya.